June 9, 2020 - PARIJATMEDIA
वि.सं.२०७७ जेठ -२८, बुधवार, ई.सं. २०२० जून -१०,शक संवत्-१९४२, नेपाल संवत्-११४० तछलागा, प्रमादी, उत्तरायण, ग्रीष्म, आषाढ कृष्णपक्ष तिथि-पञ्चमी , २१:५७ बजे उप्रान्त षष्ठी, नक्षत्र-श्रवण , १७:१४ बजे उप्रान्त धनिष्ठा, योग-ऐन्द्र , १३:११ बजे उप्रान्त वैधृति, करण-कौलव ०९:४४ बजेदेखि तैतिल , २१:५७ बजे उप्रान्त भद्रा,चन्द्रराशि-मकर, आनन्दादि योग-छत्र, सूर्योदय-५:०९, सूर्यास्त-१८:५८, दिनमान-३४ घडी ३१ पला। मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) – बुवा आमा तथा अग्रजहरुबाट सहयोग पाईने हुदा मन प्रफुल्लित हुनेछ । थोरै समयको प्रयत्ने सहजै गन्तब्य तथा लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ । अवसरहरुको सदुपयोग गर्न सकिने तथा भविश्यको लागि फाईदा हुने काम गर्ने बाताबरण बनाउन सकिनेछ । माया प्रेममा नजिक भई आफ्ना भावना साटासाट गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायबाट मनग्गे आम्दानि हुनेछ। बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू
म संग एक रात सुत्नुहोस तपाइको गुन तिर्न अरु केहि छैन,,
आजको प्रस्तुति यो एउटा कथा नभएर काठमाडौँका धेरै ठाउँहरुका हकिकत कथा पनि हो। हामी काठमाडौँमा रातीमा डुलेका छैनौ भने सायद ग्यान नै छैन होला। कतै बाध्यताले मान्छे रातारात बिग्री रहेका छन् त कतै रहरले बिग्री रहेका छन्। आजको यो कथा बरिस्ठ पत्रकार यबं साहित्यकार कृष्ण आचार्यले लेख्नु भएको हो। उहाँले लेखेको कथा खर्हो मिडिया च्यानलमा बाचन गरिएको थियो । लिफ्ट को लागी हात हल्लियो। यति राती मागिएको लिफ्टलाई बेवास्ता गर्नु हुदैन भन्ने लग्यो। प्राय अफिसको काम सकेर म रातको १२ बजे घर जान्थे। नयाँ बानेस्वर बाट किर्तिपुर सम्मको यात्रा हुन्थेयो। त्यस दिन पनि म बबर महल पुगेको थिए। जहाँ कुनै युवतीको हात हल्लियो र म आफ्नो मोटर साईकल रोक्न बाध्य भए। ‘प्लिज मलाइ लिफ्ट दिनुहोस न दाई ट्याक्सीनै पाइएन’ मधुर आवाजमा उसले भनि र उसको दाई शब्दले मलाई कता कता नरमाईलो लाग्यो। एक पटक उ तिर कर्के नजर लगाए। साच्चै आत्त
भर्खर कक्षा ६ मा उक्लिएकी छिमेकमा बस्ने नानीले सोधिन्- ‘दिदी हजुरको ब्वाइफ्रेन्ड छ ?’ मैले जवाफ दिइनँ । त्यसअघि आन्टीको छोराले भनेको थियो, ‘मैले हिजो हजुरलाई ब्वाइफ्रेन्डसँग देखेको ।’ कति निर्धक्कसँग भन्यो उसले मलाई ब्वाइफ्रेन्डसँग देखेको ! सायद हिजो केटासाथीको बाइकमा आइरहेको देखेर उसले त्यसो भनेको हुनुपर्छ । मैले उसलाई जिस्केर भनिदिएकी थिएँ ‘कस्तो छ ?’ उसले ‘राम्रै छ तर अलि काले रहेछ’ भन्यो । यति साना केटाकेटीलाई प्रेमप्रति कति चासो ! जमाना कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो । मेरी आमाको पालामा प्रेम भन्ने शब्दै थाहा नपाई अपरिचित मेरा बासँग बिहे भयो । तर, अहिले भने भर्खर ५, ६ कक्षा पढ्दै गरेका नानीबाबुहरू लभको कुरा गर्छन् । हामी स्कुल पढ्दासमेत ‘लभ’ भन्ने यति खुलेआम भइसकेको थियो । ९, १० कक्षा पढ्दा भने कक्षामा एक दुई जोडी थिए । जिस्काउन खूब रमाइलो लाग्थ्यो । उमेरसँगै बढ्दै गरेका रहरमा एक चाहना थि
महिलाको स्तनमै किन आ’कर्षित हुन्छन त पुरुषहरु ?
तपाईंलाई थाहा छ पुरुषहरु महिलाको स्तनमा किन अ’कर्षित हुन्छन् ? आखिर किन उनीहरुको यो बानीलाई मानिसहरुले का’मवासनाको रुपमा हेर्ने गर्दछन् ? यो प्रश्नले महिलाहरुमाथि पनि त्यत्तिकै खुल्दुली मच्चाइरहेको होला । तर यसको जवाफ पुरुषहरुसँग पनि छैन । आउनुहोस्, यो सँग सम्बन्धित केहि तथ्यपरक कुराहरुको बारेमा जानकारी लिऔँ। स्पष्ट रुपमा पुरुषहरु कहिले पनि उनीहरु महिलाको स्तनप्रति किन यति धेरै आ’कर्षित हुन्छन् भन्ने कुरा बताउन सक्दैनन् । यसमा भएको अध्ययनमा थुप्रै कारणहरु पत्ता लागेका छन् । जब पुरुषहरु महिलासँग कुराकानी गर्न थाल्छन् तब उनीहरुको आँखा महिलाहरुको आँखामा नभई ब’क्षस्थलमा हुने गर्दछ । त्यसपछि उनीहरु गर्दनमा हेर्ने गर्दछन् र त्यसपछि मात्र आँखामा पुग्छन् । उनीहरु बिस्तारै बिस्तारै आफनो ह’र्मोनको आदेश अनुसार वक्षस्थलमा नियाल्न पुग्दछन् । यस्तो ‘बडि ल्याङ्वेज’ भएका पुरुषहरुलाई महिलाहरुले तुरुन
हरेक श्रीमान् वा प्रेमीले बुझ्नैपर्ने महिनावारीको ठिक अघि महिलामा देखिने यो परिबर्तन
त्यतिबेला हाम्रो विवाह भएको सायद दुई वा तीन महिनामात्र भएको थियो । हामी हरेक वा दोस्रो विकेन्डमा फिल्म हेर्न जान्थ्यौं । एक दिन मैले मोना ‘श्रीमती’ लाई अफिसमा अत्यधिक काम भएकाले फिल्म हेर्न जान नसक्ने बताए । यति सुनेपछि उनी अचानक रिसाइन् । त्यो सामान्य रिस थिएन रिसको पारा निकै माथि पुगेको थियो । यति सानो कुरामा पनि किन यति धेरै रिसाएको होला भनेर मलाई अचम्म लाग्यो । यति भन्दै गर्दा सन्तोष हाँसिरहेका थिए । उनीसँगै बसेकी मोना आफ्नो हाँसो लुकाउने कोसिस गरिरहेकी थिइन् । दुबैको विवाह भएको एक वर्षभन्दा बढि भइसकेको छ अब उनीहरुबीचको स’म्बन्ध निकै प्रगाढ छ । सन्तोष र मोनाको मागी विवाह भएको थियो । सन्तोष जुन घटनालाई याद गरिरहेका छन् त्यति बेला मोना प्रि मि’न्स्ट्रुअल स्ट्रेस ‘पीएमएस’ अर्थात् महिनावारी अघिको तनावबाट गुज्रिरहेकी थिइन् । राजस्थानको घ’टना मोना र सन्तोषले जुन कुरा हाँसीहाँसी बताइ
“को’रोनासित डर लाग्न छाड्यो”
उषा खड्गी सातौं मिस नेपाल हुन्। सन् २००० मा आयोजना भएको मिस नेपाल नामक प्रतियोगिता जितेकी थिइन्। उषा सन् १९९९ मा मिस पोखराको पहिलो उप विजेता थिइन् र पछि उनले सन् २००० मा मिस बीरगञ्ज भाग लिँदै पहिलो उप विजेता भएकी थिइन्। उनको विवाह नेपाल टेलिभिजनको पूर्व कार्यक्रम प्रस्तोता जिपि तिमिल्सिनासँग भएको थियो भने उनीबाट मा’नसिक यातना दिएको भन्दै उनले स’म्बन्ध बिच्छेद गरेकी थिइन्। वीरगञ्ज निवासी उत्तमबहादुर खड्गी र उर्मिला खड्गीकी सुपुत्री उषाले सन् १९९९मा पोखरा सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिई प्रथम उप-विजेताको उपाधी हासिल गरेकी थिइन्। तीन दिदी-बहिनी र एक भाइहरूमध्ये जेठी उषाले प्रवेशिका परीक्षा वीरगञ्ज कन्या माध्यमिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण गरेकी थिइन्। हरिखेतान महिला बहुमुखी क्याम्पस, वीरगञ्जबाट आई ए उत्तीर्ण भएकी उषा मिस नेपाल हुँदा सोही क्याम्पसमा बी ए ‘प्रथम वर्ष’मा अध्ययनरत थिइन्। मीस नेपाल
नुवाकोटकी मनमाया तामाङ माइत बसेको लामै समय भएको थियो। फुर्सदिली उनी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय थिइन्। सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका साथीको मध्यमबाट उनीलाई नयाँ व्यक्तिले साथी बन्न प्रस्ताव ग-यो। उनले साथी बन्न आएको प्रस्ताव स्वीकार गरिन्। त्यसपछि हल्काफुल्का कुराकानी हुन थाल्यो। यसको सात महिनापछि उनीहरु अझ नजिक बने। नजिक बन्नका लागि सजिलो कारण बन्यो, दुवै जनाको समान पीडा। उदयपुरका भीम सुबेदीले आफ्नी पत्नी बितेको पाँच वर्ष भइसकेको बताएपछि श्रीमानबाट अलग रहेकी मनमायाको मन पग्लियो। त्यस पछि नम्बर साटासाट गरेर उनीहरु फोनमा रम्न लागे। बहराइनमा रहेका भीम सुबेदी नेपाल आउने कुरा भयो। मनमाया खुसीसाथ उनलाई लिन एयरपोर्ट पुगिन्। त्यसपछि केही दिन उनीहरुको बास होटलमा भयो। मनमाया नयाँ सपनाका चाङ लिएर नुवाकोट फर्किइन्, भीम उदयपुर पुगे। दुवैको फोन स’म्पर्क र सञ्जालमा कुराकानी निरन्तर भैरह्यो। भीमले देखाएको व
नमस्कार, मेरो नाम सुप्रीया भिटवाल हो, मेरो उमेर २६ वर्ष भयो । मलाई पुरुससँगको स’म्भोगमा पुरुष स्ख’लित हुँदा म उसको वि’र्य खाने गर्दछु । केटाको वि’र्य खाँदा मात्रै मलाई यौ’न आ’नन्द मिल्छ । डाक्टर साब यसरी वि’र्य खाँदा कुनै शा’रिरिक हानी नोक्सानी गर् कि गर्दैन ? साथैं यसरी वि’र्यपान गर्दा महिलाको मोटोप नमा बृद्धि हुन्छ भन्छन् यो सत्य हो कि होईन ?जब मानिसमा ज्ञानको अवस्था सृजना भएको थियो उक्त समयमा पनि शु’क्रकिट सेवन गर्ने कुराले मानविय जीवनमा कुनै असर गर्दछ भनेर लेखिएको छैन । डाक्टर सुबोध कुमार पोखरेल(बरिष्ठ यौन तथा प्रजनन विशेषज्ञ) को उत्तर : विज्ञानमा मात्रै होईन विज्ञान भन्दा पहिले प्राचिन कालमा वि’र्यपानले स्वास्थ्यलाई कुनै असर गर्दैन भन्ने कुरा लेखिएको छ । आजको आधुनिक विज्ञान विकास नभइसकेको अवस्थामा जब मानिसमा ज्ञानको अवस्था सृजना भएको थियो उक्त समयमा पनि शु’क्रकिट सेवन गर्ने क
किन युवतीहरु चाहन्छन्, केटाले नै प्रेम प्रस्ताव राखुन् ? यस्तो रहेछ रहस्य
समयसँगै अहिलेको युवापुस्तामा धेरै परिवर्तन आइरहेको छ । तर पनि केही पुराना मान्यताहरुलाई छोड्न सक्दैनौं ? कुनै स’म्बन्धको लागि पहल पुरुषले नै गर्नुपर्ने किन ? हामी आफ्नो विचारमा त धेरै अगाडि निस्किएका छौं तर, कैयौं मामिलामा अहिले पनि हामी पछाडि छौं । युवतीहरुले युवकहरुसँग सम्बन्धको सुरुवात गर्ने आशा गर्नुको पछाडि धेरै कारणहरु छन् । आखिर यस्तो किन भइरहेको छ । अस्विकारको डर युवतीहरुको सबैभन्दा ठूलो डर हो रिजेक्सन् । सामान्यरुपमा महिलाहरु पुरुषले आफ्नो प्रेम प्रस्तावलाई अस्विकार गरिदिए भने के होला भन्ने सोच्छन् । उनीहरुको मनमा यो कुराको डर हमेसा हुन्छ । ‘उसमा मलाई कुनै रुची छैन । म त्यो स्थितीको सामना कसरी गर्न सक्छु ? अरु मानिसहरुलाई यो कुरा थाहा भयो भने उनीहरुले मेरो बारेमा के सोच्नेछन्। यस खालका धेरै प्रश्नहरु छन् जुन उनीहरुको दिमागमा दौडिरहेको हुन्छ । यसै डरको कारणले उनीहरु जुन युवकल